Hormuud News Friday, April 27th, 2018 | 08:15
[Tuesday, December 4th, 12] :: Suldaanka guud oo Guddiga doorashooyinka iyo Xukuumadda Somaliland Baaq culus u jeediyey
Hargeysa(RH):- Suldaanka guud ee Beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir, ayaa Guddiga doorashooyinka ugu baaqay inay qanciyaan cid kasta oo cabasho ka qabta doorashada dawladaha hoose ee Somaliland ka qabsoontay Arbacadii toddobaadkii hore, gaar ahaan Ururrada Siyaasadda qaarkood oo ku cawday in lagaga shubtay doorashada.
Suldaan Maxamed wuxuu ku eedeeyey Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil (Saylici) inuu qayb ka ahaa ku shubusho Ururrada doorashada ka qaybgalay qaarkood sheegeen inay ka dhacday deegaanno ka tirsan gobollada Awdal iyo Selal oo uu maalintii doorashadu qabsoontay iyo habeenkii ka horreeyey-ba Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ku sugnaa.
Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo shalay Shir Jaraa’id ku qabtay magaalada Hargeysa, ayaa Guddiga doorashooyinka Somaliland u soo jeediyey inaanay ku dhawaaqin natiijada guud ee doorashada golayaasha deegaanka oo 28-kii November 2012 ka qabsoontay guud ahaan gobollada iyo degmooyinka Somaliland illaa ay qanciyaan Ururrada doorashada galay ee cabashada muujiyey.
“Waxyaabaha caalamka ka dhaca iyo waxa maanta Somaliland ka taagani way kala duwan yihiin, dawladaha caalamku aqoonsigeeda ayey mid waliba haysataa, laakiin innagu maanta waxaynu eegaynaa in aqoonsigeennii ay doorashadaa golayaasha deegaanku sabab u noqoto.” Sidaa ayuu yidhi Suldaan Maxamed waxaanu Suldaanka oo hadalkiisa sii wataa intaa ku daray oo uu yidhi; “Cidda eedda ku yeelanaysaa waxa weeye cidda u xil-saaran oo ah Guddiga doorashooyinka Qaranka. Intaan la yeedhin natiijada soo baxday iyo asxaabta kala hadhay ayaa waxa soo baxay war sheegaya in Sanaaduuqda cod-bixinta qaar lagu shubtay, arrinkaasina wuxu ku wanaagsan yahay intaan natiijada kama-dambaysta ah lagu dhawaaqin in Komishinka doorashadu xalkeeda galaan oo wixii la horkeeno ee caddayn ah ay hoos u eegaan oo ay wax ku qaataan.”
“Xisbi dhan/Urur dhan oo tartanka doorashada ku jiray markuu ka cabanayo inaynu ku cadaadinnaa waajib maaha, waxa weeye qof waliba xaq buu leeyahay in xaqiisa loo qaado. Tusaale ahaan Urur-siyaasadeedka Xaqsoor dhibaato badan bay ka sheegteen Bari hadday tahay iyo hadday Galbeedka gobolka Awdal tahay in Sanaaduuqdii cod-bixinta doorashada Baabuurta lagala degay oo lagu shubtay. Markaa, annagu ka Salaaddiin ahaan waxaannu leenahay waxay xaq u leeyihiin in Komishanka doorashooyinku ay ka jawaabaan cabashadooda iyaguna waxa ay caddayn hayaan soo dhigaan.”
“Laakiin, in la yidhaahdo Axsaabtu markay kala guulaysato ayaa laga jawaabayaa….maxaa guul ba la gaadhi horta dhibaataa ka soo horreysaye waa in dhibaatada meesha taalla la xalliyo oo laga gun-gaadho, haddaan taa la xallinna waxay noqonaysaa Hal bacaad lagu lisay wax alla wixii Somaliland 40-ka sano u soo dagaallamaysay. Markaa, anigu waxaan leeyahay yaan laga indha-qarsannin xaqiiqada.” ayuu yidhi Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir.
Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir, mar uu ka hadlayey sida ay Sandalad ahaan ugu siman yihiin cidda guulaysata iyo cidda doorashada ku hadha-ba waxa uu yidhi; “Ninkii Xisbigiisu guulaysto iyo kan la leeyahay waad hadhay waa laba Muwaaddin, Annagu laba Muwaaddin waannu u simannahay oo mid kasta cabashadiisa waannu dhagaysanaynaa.”
Suldaan Maxamed mar uu ka hadlayey cidda uu u nisbaynayo qaladaadka laga muujinayo in doorashada lagu sameeyey waxa uu yidhi; “Cid kale loo nisbayn-maayo waxa dhacay oo anigu Xisbil-xaakimka (KULMIYE) u nisbayn maayo ee waxaan u nisbaynayaa cidda Komishinka doorashada masuuliyaddiisa haysata ee doorashooyinka ku shaqada leh, markaa waa inay Guddiga doorashadu eedayntaa la soo jeediyey inay ka jawaabaan. Laakiin, Berrito hadday yidhaahdaan natiijada la kala helay baannu ku dhawaaqaynaa, halkaa waxa ka soo socota fool-xumo. Annagu taannnu ka hortagaynaa waxa weeye intaan natiijada Komishanku ku dhawaaqin inay ka jawaabaan cabashooyinka Axsaabta. Waxaanan leeyahay Somaliland maanta wax lagu ciyaaro maaha.”
Suldaan Maxamed Waxa uu sheegay in goob-joogayaasha caalamiga ah ee ka soo qaybgalay doorashada Somaliland maqal iyo muuqaalba ku haystaan siday doorashadu u dhacday, isla markaana warbixintooda rasmiga ah ay la sugayaan sida dhibaatooyinka iyo cabashooyinka Ururrada ee hadda taagan ay la sugayaan, sidaa daraaddeedna loo baahan yahay inaanay doorashadaasi naanays ku noqon Somaliland ee ay noqoto mid dalka iyo dadka-ba wax u soo kordhisa.
Waxa uu Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir u soo jeediyey Urur-siyaasadeedka Xaqsoor oo ah Ururka cabashada ugu badan ee ku shubashada doorashada la xidhiidha qabaa inay cabashadooda caddayn buuxda oo lagu qanco u helaan, isla markaana u gudbiyaan Guddiga doorashooyinka Qaranka si cabashadaasi waxa dhacay markhaati ugu noqoto.
Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir oo la hadlaya Xukuumadda Madaxweyne Siilaanyo ee hadda talada dalka haysa waxa uu yidhi; “Xukuumadda waxaan leeyahay haddii dhibaato iyo qaladaad ay dhacaan idinku garab uun ha isa-siinnina’e ee waxa la idinka rabaa waxa weeye inaad caddaaladda ummadda eegtaan, illeen sidii la idinku soo doortay Kursiga caddaalad bay ahayd, laakiin haddaad dadka u caddaalad-samayn waydaan oo caddaalad-darrada taageertaan idinkana waxba kama jiraan. Waa la is-dhagaystaa, waa la is-qanciyaa. Xaqsoor arrinkiisu waad dhacdeen maahee waa la boobay weeye.”
Suldaan Maxamed oo si gaar ah ula hadlayey Taageerayaasha Urur-siyaasadeedka Xaqsoor, waxa uu yidhi; “Beelaha Xaqsoor ku jirana waxaan leeyahay nabadgelyadana innoo ilaaliya haddii la inna booboo iyo haddii la inna booboo iyo haddii la inna dhacaba horto aynu nabadgelyada ilaalinno oo innagu yeynaan khalkhal bilaabin. Waayo? Meesha waxa looga baahan yahay waxaana inaan nabad ku dhammaysato waxaad ka cabanaysana nabad ku caddaysato, sida keliya ee ay nabadgelyadu ku ansaxaysaana waa sidaa.”
“Xukuumaddana waxaan leeyahay maaddaama aad idinkuba doorasho ku timaaddeen caddaalad iyo wax qabad bay bulshadu idiinka baahan tahay. Waxaanan leeyahay waxan oo dhan Komishinka doorashooyinka Qaranka ayaa doorashada ka masuul ah waa inuu qanciyaa ciddii cabasho qabta, laakiin in cid gaar ah cidhibta hoosteeda la geliyo ka yeeli mayno ee waa in Komishinku jawaab cad ka bixiyaa cabashada ururrada doorashada galay qabaan.” ayuu yidhi Suldaan Maxamed.
Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir waxa uu eedeyn u jeediyey Madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan-Saylici, waxaanu Suldaanka oo arrintaa ka hadlayaa yidhi; “Galbeed kii Xisbiga KULMIYE u fadhiyey ayaa sheegay in la boobay Sanaaduuqda, wuxu yidhi; ‘Anigu KULMIYE ayaan Wakiil uga ahaa meesha, Sanaaduuqdii waxa boobay buu yidhi Madaxweyne ku-xigeenka.” “Waxyaabahaas oo dhan sidii loo xallinayo Komishinkaa laga doonayaa, wax waliba xalkeeda wuu leeyahay, laakiin hadday noqoto ku wadaay dhibteeda oo dhan waxa iska leh Komishinka doorashooyinka, Somaliland-na dhibaato in loo soo gaadhsiiyo annaga ayaan oggolayn.” Sidaa ayuu yidhi Suldaanka guud ee Beelaha Somaliland Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir.